Zvinyorwa zveRoma Sulla pa Martech Zone
Zvinyorwa na Roman Sulla
Roman akapinda munyika yedhijitari data mu2013.Akakwanisa kutora chikamu munzira zhinji: kumberi-kumagumo kunogadzira, kumberi-kumagumo lead, kusimudzira lead, muridzi wechigadzirwa, uye Musoro weChigadzirwa. Nekudaro, iye akatora chikamu mukugadzira kiyi tracker; CRM-maturusi emasangano; maturusi ekuronga uye kuyedza nzira dzekutenga enhau; uye yeruzhinji webhu-sevhisi yekubatanidza vatengi nevatengi uye kuona kubatana kunoshanda pakati pavo. Kubva 2019 anga achishanda JustControl.it